အကြမ်းဖက်မှုမှာ မြို့လူထုပါဝင်ခြင်း မရှိလို့ တောင်ကုတ်မြို့ခံပြော ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့မှာ ဥပဒေမဲ့ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ဖြစ်ပွားသွားမှုမှာ တောင်ကုတ်မြို့လူထုပါဝင်ပတ်သက်မှု မရှိဘဲ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိတဲ့အတွက် ဖြစ်ပွားရတာလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ 2012-06-07
လူမြင်ကွင်းမှာ နာရီနဲ့ချီဖြစ်ပွားသွားတဲ့ သတ်ဖြတ်မှုမှာ တာဝန်ရှိသူတွေက ကြိုတင်တားဆီးရင် အခြေအနေအခုလောက်ဆိုးဝါးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တောင်ကုတ်မြို့နယ် NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်လှက ထောက်ပြပါတယ်။
Nov 27, 2012 01:47 AM
Dear Mr Khin Hla, why are you keeping silent after many Arakanese people were killed and murdered? I hope you have known what happening in Maung Daw and Site Tway and others areas.
Jun 10, 2012 11:38 AM
တောမြို့ကလေး တမြို့ပါ ဘယ်ကလူတွေ လာလုပ်လဲ မသိဘူးတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကို အဲလိုပဲ သွားမှာလား
မြို့လူထုမပါ ရင် အဲဒီ ရာနှင့်ချီ တဲ့လူအုပ်ကြီးက ဥစ္စာစောင့်များလို ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီး ရုတ်တရက်ပြန်ပျောက်သွားပါသလား? မိမိလူမျိုး မတရားလုပ်တာကိုတော့ အားလုံးဝိုင်းပြီး ဖုံးဖိတတ်ကြပါသလား။ စိတ်မကောင်းပါဘူး ပြောရုံနဲ့မလုံလောက်ပါ။
မတရားမှုကို မတရားမှန်းသိသိနဲ့ ၀ိုင်းကူ ဖုံးကွယ်ပေးခြင်းသည်လည်း အလိုတူအလိုပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်များတဲ့လူတွေထဲက တစ်ယောက်မှမမိဘူး ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမယုံပါ ခင်ဗျား။
We must consider the fact that the entire incident was masterminded by the local military authority who instigated the muslim youths to rape and kill the teenager. though there has not been any testimony to prove this, fingers are now being pointed at the Tatmadaw, which to derive profit made the thugs to act inabeastly manner
Jun 08, 2012 02:58 AM